Madaxweynaha DDS oo Kormeer Shaqo ku Maraya Gabalada – Rasaasa News
Madaxweynaha DDS oo Kormeer Shaqo ku Maraya Gabalada
Sep 26, 2011 Madaxweynaha DDS oo Kormeer Shaqo ku Maraya Gabalada
Wafti uu hogaaminayo madaxweynaha dawlada degaanka Somalida Ethiopia, oo ay weheliyaan xubno ONLF ah iyo fanaanii u dhalatay degaanka oo ka yimid dibada, oo socdaal shaqo ku maraya qaar ka mid ah gabalada dalka.
Waftigan uu hogaaminayo madaxweynuhu ayey u jeedada socdaalkoodu tahay u kuur galida arimaha nabad galiyada iyo abaaraha ka jira gabalada.
Gabalda ay madaxweynaha iyo waftigiisu marayaan ayaa ah gabalada Jarar iyo Nogob. Labadan gabal ayaa daris la ah xarunta maamulka ee degaanka Somalida Ethiopia, hore waxaa si xoog leh uga hawlgali jiray kooxda Jwxo-shiil ama UBO oo aad degaanka looga yaqaan.
Wararku waxay sheegayaan in labadan gabal laga sifeeyey kooxda Jwxo-shiil, taas oo uu hubsiimo u tagay madaxweynuhu, lagana dareemayo waftiga iyo sida ay ugu dhex lugaynayaan dhulka miyiga ah.
Madaxweynaha ayaa waxaa uu isticmaalayaa adiyoolajiyada [ideology] la mid ah mid ay isticmaalaan madaxda dalalka reer galbeedku xiliyada doorashooyinka. Inta uu socdaalka ku jiro madaxweynaha ayaa la fadhiisanaya dadka reer miyiga ah ee uu kula kulmo degaanadaas.
Arimaha uu samaynayo madaxweynaha ayaa kor u sii qaadi kara magaca madaxweynaha iyo cimriga maamulkiisa. Waayo wali hore uma soo marin degaanka Somalida madaxweyne si dhab ah qalbiga u siiya dadka ree miyiga ah iyo kuwa magaalada joogaba.
Degma kasta oo ay madaxweynaha iyo waftigu tagaan, waxaa dadweynaha maaweeliya fanaaniinta oo qaadaya heeso ku saabsan nabada iyo horumarka. Waxaa kale oo iyana dadka u jeedinaya hadalo xubnaha ururka ONLF oo shacabka ka dhaadhicinaya in ayna aaminin caydh been ah. Iyaga oo sheegaya in ay ONLF iyagu ka soo hadheen una yimaadeen in ay ka shaqeeyaan wanaaga dadweynaha.
Dabley Dilal ka Fulinayey Kenya oo la Qabtay
Dhalinyaro u Dhalatay Degaanka Somalida oo Lagu Xidhay Port Elizebath